R/wasaaraha Israel iyo Hogaamiyaha Sudan oo ku kulmay magaalada Entebbe ee Uganda… – Hagaag.com
R/wasaaraha Israel iyo Hogaamiyaha Sudan oo ku kulmay magaalada Entebbe ee Uganda…
Posted on 4 Febraayo 2020 by Admin in World // 0 Comments
Rai’isul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in uu kula kulmay dalka Ugandha Madaxweynaha Golaha siyaadada Sudan, Abdel Fattah Al-Burhan, si loo habeeyo xiriirka ka dhexeeya Sudan iyo Israel. Halka sarkaal reer Sudan ahi xaqiijiyey in kulankan ay Imaaraadka isku dubariday, taas oo dhalisay cambaareyn uga timid Falastiin.
Xafiiska Rai’isul wasaaraha Israel ayaa war qoraal ah wuxuu ku yiri – in Netanyahu iyo Al-Burhan ay Isniintii magaalada Entebbe kaga wada hadleen qaabab iskaashi oo u horseedi doona in si caadi ah loo soo celiyo xiriirka labada dowladood, iyadoo xusid mudan in kulankaasi xiriiriye ka aheyd Uganda.
Wuxuu intaas ku daray, “General Al-Burhan wuxuu doonayaa inuu dalkiisa ka caawiyo sidii hore loogu marin lahaa hannaan casriyeysan, iyadoo la joojinayo go’doominta oo laga dhigo dal ka mid ah khariidada adduunka.”
Ilo-wareedyo Israel ayaa sheegaya in Netanyahu uu weydiistay Al-Burhan – intii lagu guda jiray kulanka labada saacadood socday – inuu u furo duullimaadyada Israa’iil ee ka imanaya Latin America inay isticmaalaan hawada Sudan, taasi oo soo gaabinaysa duullimaadyada saddex saacadood, halka Mas’uulka Sudan uu ka codsaday inuu dhexdhexaadiyo si loo fududeeyo cunaqabateynta Mareykanka ee dalkiisa, isla markaana magaca Sudan looga tirtiro liiska argagixisida.
Dhinaca Israa’iil ayaa laga shaaciyey talaabada kulanka aan hore loo arag, halka Golaha Siyaadada Sudan uu ka aamusay.
Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa soo xigatay sarkaal sare oo ka tirsan milatariga Sudan in uu sheegay in Imaaraatka ay iskuduwday kulanka Al-Burhan iyo Netanyahu, isagoo intaas ku daray in kulanka looga gollahaa in Sudan looga saaro liiska argagixisada Mareykanka.
La tashi la’aan
Magaalada Khartoum, afhayeenka xukuumadda Sudan, Feysal Saalax, wuxuu sheegay in kulanka Hogaamiyaha siyaadada Sudan uu la yeeshay Rai’isul Wasaaraha Israa’iil uu ka dhacay iyada oo aan la ogeyn ama lagala tashan Golaha.
Saalax wuxuu intaas ku daray – in bayaan ay soo saareen – in golaha wasiirradu ay sugayaan soo laabashada Lieutenant-General Al-Burhan si uu uga bixiyo caddayn ku saabsan kulanka la sheegay.
Wasiirka arrimaha dibedda ee Sudan, Asma Mohamed Abdullah, ayaa iyaduna xustay – iyadoo ka jawaabayso su’aal uu weydiiyay weriye ka tirsan Al-Jazeera – oo ah inay warka ka maqashay warbaahinta, sida qof kasta oo uu u maqlay, waxna aan ka ogeyn.
Dhinaca kale Jawaabta Falastiin, Xoghayaha Golaha Fulinta ee Ururka Xoreynta Falastiin, Saeb Erekat, ayaa dhalleeceeyay shirkii Al-Burhan uu kula yeeshay Netanyahu Uganda.
Erekat ayaa ku tilmaamay kulanka mid dhabarka laga toogtay dadka reer Falastiin, iyo ka bixitaan khaawan ee dadaalkii nabadeed ee Carabta.
Sidoo kale kulankaasi waxaa dhaleeceeyey xarakadaha Xamas iyo Jihaad al-Islami oo ka dhisan Gaza.
About Admin (10876 Articles)